နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: လိုအပ်ရင် သုံးကြည့်ပါ..Top 10 Vital Hacking Software and Tools
လိုအပ်ရင် သုံးကြည့်ပါ..Top 10 Vital Hacking Software and Tools
The collection contains the most necessary programs and utilities for the hacker. All is presented inaconvenient environment with background music.
Containsafollowing software:
Cain and Abel (sniffer)
- John the Ripper (powerful brootforce)
- NetStumbler (allows to define radius of action of network WiFi - in real time for the diagram it is possible to see size ofauseful signal)
- Nmap (one of the best network scanner)
- Putty (a quite good telnet the client)
- SuperScan (powerful scanner TCP of ports, pinger and hostname resolver)
- Hping (allows to generate special ICMP/UDP/TCP packages and to look through answers pingahost in style of the usual utility ping)
- Lcp (audit and restoration of passwords Windows NT / 2000 / XP / 2003)
- Nikto (perl the scanner broken Webaserver, with support SSL)
- Kismet (snifferawireless network 802.11 and the decoder of packages)
(ကြိုပြောထားပါ့မယ် . အခုဒီ ကောင်လေးကို အဆင်ပြေသလို ဥာဏ်ရှိသလို အသုံးပြုပါ . ကျွန်တော့်ကို ဘယ်လိုသုံးရမယ် ဘာလဲဆိုတာ ပြန်မမေးကြဖို့နဲ့၊ နောက်တစ်ခါတင်ပေးပါဦးလို့ မတောင်းဆိုဖို့ကိုပါ ထပ်ပြီးတော့ တောင်းဆိုလိုပါတယ်၊ တစ်ကယ်တော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကို hacking နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မကျွမ်းကျင်ပါ . လက်လှမ်းမီသလောက်လေးပဲ လေ့လာနေတာပါ.) ဘလောဂ်ရေးနေတာလဲ တတ်လို့မဟုတ်ပါဘူး ၀ါသနာဝါလို့ လုပ်နေတာပါ ..
Posted by P Kyaw Swa at 10:25 AM